Ahoana no hampitomboan'ny Kristianisma Nitrate Sodium
Nitrate Crystals Sodium
Ny nitrhy ny sodium dia fahita mahazatra, hita amin'ny sakafo, vongan-dranomamy, lasely enamel ary pyrotechnics. Ny nitrehy Sodium, NaNO 3 , dia manamboatra kristaly mainty tsy misy loko. Na dia somary sarotra kokoa aza ireo kristaly ireo dia mitombo kokoa noho ny sasany amin'ireo kristaly mpandidy, ny trano kristaly mahaliana dia mahatonga azy ireo ho mendrika ny ezaka. Ny kristaly dia mitovy amin'ny kalcite, mampiseho ny sasany amin'ireo toetra mitovy. Azo ampiasaina ny kristaly nitrita ao amin'ny loharano mba handinihina ny fifandimbiasana roa, ny fifindrana ary ny fihodinana.
Solon-tsakafo Kristiana Nitrate Crystal
Manomàna vahaolana manalasala aloha.
Manafina metatra siramamy 110 grama amin'ny rano mafana 100 ml. Ity dia vahaolana supersaturated. Ny fomba iray amin'ny fitomboan'ny kristaly dia ny mamela ity vahaolana ity ho mafana ao amin'ny toerana tsy voavonjy ary mamela azy hamokatra kristaly rehefa mivoaka ny rano.
Ny fomba iray hafa hampitombo an'io kristaly io dia ny fitomboan'ny kristaly tokana ao anaty famehezana voarakitra avy amin'ny vahaolana supersaturated. Raha misafidy ny hanaraka an'io fomba io ianao, dia araho ilay vahaolana voalaza etsy aloha, avelao hamafisina io vahaolana io, ary ampidiro am-bifotsy siramamy roa ny sira ary ampidiro ny fitoeran-drano. Ny nitrita avy amin'ny nitrify ny habetsaka dia hametraka eo amin'ny voan-kesika, mamokatra vovo-sira sodium nitrate. Omeo roa andro izay hitrangan'izany.
Atsaharo ny vahaolana mahatsiravina. Omeo vovo kely amin'io vahaolana io ho toy ny lovia kely. Avelao hivoaka ny rano mba hamokarana kristaly kely voa. Mifidiana kristaly iray na roa mba hahazoana fitomboana bebe kokoa.
Mba hanomanana ny vahaolana mitombo be dia be, ny vahaolana misy anao dia manampy ny 3 gramin'ny nitrita sodium ho 100 ml ny rano amin'ny vahaolana tany am-piandohana. Noho izany, raha manomana volo 300 ml ianao, dia hampidirinao 9 grama ny nitrate sodium.
Ampidiro amim-pitandremana ny ranom-boasarinao amin'ireto rano ireto. Azonao atao ny manala ny kristaly avy amin'ny monolaila tsy misy. Ny monofilamana na drafitra tsy misy idiran'ny foza dia ampiasaina satria tsy hamono vahaolana izy io, ka mahatonga azy halefa.
Atsofohy ny tavoahangy ary avelao hivoatra amin'ny kristaly ny mari-pana amin'ny hafanana tsy tapaka, ny toerana izay tsy hahakivy azy ireo. Ny nitratr'i Sodium dia mahatsapa tsara ny fiovana amin'ny mari-pana, noho izany dia zava-dehibe ny fitanana hafanana tsy tapaka. Raha toa ianao ka sarotra ny mihazona hafanana, dia azonao atao ny mametraka ilay siny feno tombo-kase ao anaty rano. Raha tsy hitanao ny fitomboan'ny kristaly aorian'ny andro vitsivitsy dia andramo kely ny hafanana.
Ahoana no hanamboarana kristaly voa?
Ampitomboy ny volanao kristianina: Torolalana
Aiza no hividianana Hydroxide Sodium na Lye
Ahoana no Ataovy Ice Cream Stick
Fampisehoana sarimihetsika Easy Photoshop - Fitaovana mihinana rongony
Ny tetikasa tetikasa tetik'asa momba ny siansa
Ahoana no hampitomboina Star Star Crystal
Pahaizana momba ny siansa faha-8
Ahoana ny fomba ampiasanao ny ravinala ampiasaina amin'ny fampiasana fitaovana roa
Ahoana no hialana amin'ny rano
Leo sy Fitiavana fitiavana fifanarahana
Classic Motocycles: Ny Kawasaki Triples
'Ny fitiavana dia manam-paharetana, ny fitiavana dia tsara' Bible Verse
Maro ny kilemaina
Conjugation Rules of Grammar
Mankalaza ny andron'ny Taombaovao Shinoa
Andron'ny reny ho an'ny mpianatra manana fahasembanana
Ady tamin'ny ady an-trano amerikana: Shots aloha
Fanontaniana iombonana: Ahoana no hijanonana mafana amin'ny môtô
Inona avy ny toe-tsaina miparitaka?
Fandraisam-bola, avy amin'ny DreamWorks ao amin'ny YouTube
Inona no tokony ho fantatrao momba ny tsy fetezana-famoretana (NDL)
Ny Tantaran'ny Nosy Galapagos
Lisitra feno amin'ny tononkalo mahazatra tokony ho fantatry ny rehetra
Famaranana ho an'ny mpangataka
Toby mavo ao amin'ny Magic Magic
Fampiasana tsy ara-dalàna avy any atsinanana mankany W
Ny finoana silamo batista
Fankalazana ny Capacocha - Ny porofo ho an'ny Soroka fanabeazana ankizy